ရေခဲသေတ္တာနှင့် သွေးအကြောင်း ဗဟုသုတ
ရေခဲသေတ္တာက သွေးအတွက် ဘာလုပ်ပေးသလဲ။1. ဆဲလ်များရှင်သန်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် သွေးများကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အအေးခန်းထားပါ။ကာကွယ်ဆေး၏ အအေးခန်းသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများစွာတွင် ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဆဲလ်များ၏ ရှင်သန်နိုင်မှုအပူချိန်သည် 2-8°C ရှိပြီး တူညီသောသွေးရှိဆဲလ်များ၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ထိန်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆောင်းပါးများစွာတွင် တွေ့ခဲ့ရသည်။
RO ရေသန့်စက်သည် အန္တရာယ်ကင်းပါသလား။
RO ရေသန့်စက်သည် ဘေးကင်းပါသလား။လူတွေရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပိုပြီး အာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍ RO ရေသန့်စင်စက်များသည် သာမန်ရေသန့်စင်စက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားသာချက်များစွာရှိသောကြောင့် RO ရေသန့်စင်စက်ကို ရွေးချယ်ကြသည်။RO wa...
admin မှ 22-05-09 ရက်နေ့တွင်
အိမ်သုံးရေသန့်စင်စက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နိယာမကို ဖော်ပြပါ အိမ်သုံးရေသန့်စင်စက်သည် ရေသန့်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အဆင့်မြင့်ပြောင်းပြန် osmosis နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အိမ်သုံးရေသန့်စင်စက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။စက်ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးမြင့်ရေကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်...
ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဂျင်နရေတာများကို နားလည်ခြင်း။
admin မှ 22-05-06 ရက်နေ့
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂျင်နရေတာသည် အဓိကအားဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်၊ ဖိအားထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ သန့်စင်သည့်စနစ်နှင့် မျက်နှာပြင်ပြသမှုစနစ်တို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ရေ၏ electrolysis ဖြင့် ထုတ်ပေးပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို လေထုထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည်။၎င်းသည် ကြီးမားသော electrolysis area ၊ low bath temperature ၊ ကောင်းမွန်သော ...
အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာကို အသုံးပြုနည်းနှင့် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သော ကိစ္စများ
အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာများ မှန်ကန်ပါသလား။အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာတွင် မြင့်မားသော အပူချိန် တိုင်းတာမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ကျယ်ပြန့်သော ထောက်လှမ်းမှု အကွာအဝေး၊ မြန်ဆန်သော အမြန်နှုန်း၊ တိုင်းတာသည့် ပစ်မှတ်အား အနှောင့်အယှက်မရှိ၊ လုံခြုံစွာ အသုံးပြုမှု စသည့် လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။၎င်းတွင် ထိတွေ့မှုမရှိသော အပူချိန်တိုင်းတာမှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် အသံအချက်ပြမှုတို့ပါရှိသည်...
Ultrasonic Cell Disruptor ကို နားလည်ရန် သင့်အား ယူဆောင်သွားပါ။
ultrasonic cell disruptor ၏ cavitation effect ၏ လက္ခဏာများသည် အဘယ်နည်း။1. တစ်ဖက်တွင် အညစ်အကြေးအလွှာရှိ ရေနွေးငွေ့အမျိုးအစား ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၏ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုသည် သန့်ရှင်းရေးအပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ရှိ ဖုန်မှုန့်များကို စုပ်ယူဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး တစ်ဖက်တွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
Biological Oxygen Demand Incubator အကြောင်း
အဆိုပါ incubator သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့် ဘက်တီးရီးယားယဉ်ကျေးမှုအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် စမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့သော သိပ္ပံသုတေသနနှင့် စက်မှုထုတ်လုပ်မှုဌာနများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။...
Dynamic Homogenizer ကို လေ့လာခြင်း
ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေသော homogenizers များသည် အစားအစာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်နှင့် ဇီဝနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ဖိအားများပြီး တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်ကွဲအက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။အဆင့် 1 စက်မစတင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို sp ဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပလပ်ထိုးပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်းရှိ centrifuges များ၏အရေးပါမှု
centrifuge စမ်းသပ်မှုသည် မကြာခဏ စမ်းသပ်မှုတွင် လျစ်လျူမရှုနိုင်သော အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။တိကျသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်သောအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စမ်းသပ်မှု၏အောင်မြင်မှုနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။အများအားဖြင့် ထုထည်ကို တိုင်းတာပုံ၊ ဘယ်လို...
Sterilizer သည် အလွန်အသုံးများသော ပိုးသတ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အပူကို ထိန်းသိမ်းထားချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိရပါမည်။အချို့သောအော်ပရေတာများသည် ပေါ့ဆစွာနှင့် အပူချိန်မတက်မီအချိန်ကို စတင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အချိန်မလုံလောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။အပူချိန်နှင့် အပူချိန်ကို အမြဲဂရုစိုက်ပါ...
UV Lamp Trolley အသိပညာ
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပိုးသတ်ဆေးမီးခွက်များကို ပိုးသတ်ကိရိယာအဖြစ် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး အဓိကအားဖြင့် ဆေးရုံလေထုကို ပိုးသတ်ရန်အတွက်သာမက သူငယ်တန်းကျောင်းများတွင် ပိုးသတ်ဆေးကျွေးခြင်း၊ အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းယူနစ်များ၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ ကြက်မွေးမြူရေးနှင့် ဘက်တီးရီးယား သုတေသနဌာန၊ ဆေးဆိုင်များတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာကုလားထိုင်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။သွားဘက်ဆိုင်ရာကုလားထိုင်ဒီဇိုင်း၏ဝိသေသဘာတွေလဲ?သွားဘက်ဆိုင်ရာထိုင်ခုံသည် သွားဆေးခန်းရှိ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုသမှုလုပ်ငန်းများနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။သွားနှင့်ခံတွင်းထိုင်ခုံများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု...
ဓာတ်ခွဲခန်း- အထူးသီးသန့် ရေသန့်စက်
Laboratory ultrapure water device သည် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ရေသန့်စင်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။၎င်းသည် အစိုင်အခဲအညစ်အကြေးများ၊ ဆားအိုင်းယွန်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ရေသန့်စင်စက်ဖြစ်သည်။အလွန်မြင့်မားသော ရေအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့် နယ်ပယ်များတွင် အလွန်သန့်စင်သောရေစက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဒါဟာ...
B-ultrasound က ဘာကိုစစ်ဆေးတာလဲ။
B-ultrasound က ဘာကိုစစ်ဆေးတာလဲ။လူတော်တော်များများက B-ultrasound နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးကြဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်ဆေးမှုအတွက်ဆေးရုံသို့သွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် B-ultrasound စစ်ဆေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ဒါဆို B-ultrasound က ဘယ်အချက်တွေကို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ။B-ultrasound သည် အမှန်အားဖြင့် Ultrasound တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သွေးအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတာရန် Oximeter ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ယခုအခါတွင်၊ အထူးသဖြင့် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသော လူများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။အလုပ်များသော ဖိအားအောက်တွင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် အလုံပိတ်၊ လေလည်ပတ်မှု မချောမွေ့ဘဲ၊ ဘဝ၏ စည်းချက်မမှန်၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအား အားနည်းလာသည်။ခွဲ...